Mhlawumbi no Twitter ama amaionga amaninzi kunamajelo asekuhlaleni, kodwa kwenzeka nokuba yinto enzima kakhulu ukuyisebenzisa. Ukuzama ukuza nomyalezo obalulekileyo ochaphazelayo kwiibalo ze-280 (mbulela ukuphucula no Twitter!) Akulula kubantu abaninzi.
Por favor, responda a 5 perguntas sobre o seu primeiro nome..
Biografia do Twitter: olinganayo, ukuba kungenjalo, ukubaa ukuba unabalinganwa be160 kuphela ukuba uchaze ukuba ungubani, yintoni oyenzayo, kwaye kutheni i-Twitter yakho ibalulekile ukulandela.
Biografia do ukuba ne-Twitter incluindo todos os idiomas ibod, tais como: I-Twitter biografia esinye sezizathu zokukhuthaza abantu ukuba bakulandele – njengokuba kunjalo okanye kungenjalo, ukuba ne-Twitter bio echaphazeleakhulu ibaluleke.
Você também pode aprender yendlela omele usando o Twitter bio-yakho, siye saqulunqa ezinye zezilwanyana ezinobulumko kakhulu esinokuzifumana kwiTwittersphere. Hlola ezi bios ezibhalwe kakuhle kwaye uthemba, uya kuphefumlelwa ukuba ubhale enye njengabo!
1 30 Imizekelo yeClever Bios kwi-Twitter
1.1 Mike Davidson
1.2 UCarrie Brown
1.3 Candice Walsh
1.4 Katie Kendall
1.5 UMartin Bartels
1.7 UJohn Cleese
1.9 Will Arnett
1.10 UJason Bateman
1.11 Alison Leiby
1.13 UTim Siedell
1.14 Damon Lindelof
1.15 Iintlungu Zokuqala Zehlabathi
1.16 Comédia Central
1.17 Tyler Clark
1.18 Johnny Cupcakes
1.20 uElon Musk
1.21 Secret kukaVictoria
1.23 Tom Hanks
1.25 tempero velho
1.27 UNathan Latka
1.28 UAaron Lee
1.29 Max Seddon
1.30 Jason Falls
2 Ukufumana Uthotho Kuwe (kunye ne-Twitter Bio)
30 Imizekelo yeClever Bios kwi-Twitter
Eu-Twitter bio ingaba yithuba elikhulu lokunika retomar emfutshane okanye iziqulatho zakho zomsebenzi kunye noMike Davidson, owayengumntu we-VP we-VP we-Design kwi-Twitter, uyazi indlela yokwandisa indawo encinane.
U-Davidson mostra uma nova versão de um kazuba zumbi na NBCNews, Disney kunye ne-ESPN, kodwa oko kuthatha ingqwalasela yakhe ingcaciso yakhe yangoku "eyiChillin". Kuya kubonisa ukuba nangona i-VP yangaphambili ye-Design kwi-Twitter iyazihlaziya nge-Twitter bios.
Ukuba ufuna ukumba ngeengcebiso apha Webhostingsecretrevealed, ngoko ke unobungqina bokuthi ungumntu ozikhukhulayo. Kwaye kwi-Twitterverse, ukuba yi-geek yinto yokuziqhayisa, njengoCarrie Brown wenza nge-Twitter biografia.
UBrown uyaziqhenya ngokuzibiza ecaleni lakhe elincinci ngokuzibiza ngokuba yi "Nerd total do computador", kwaye "Utshatile kwikhompyuter" ngelixa ephakamisa "iikhompyutheni ezimbini zekhomputha zekamva".
Kunokuba nzima ukuba umbhali aqaqambe phakathi kolwandle lwababengaba ngababhali kwi-Twitter kodwa uCandice Walsh wakwazi ukwenza kanye oko nge-bio yakhe ye-Twitter. U-Walsh wabeka ezi zinto zimbini waziwa ngazo njengomgca wokuqala we-bio yakhe, eyintloko ebomvu yokuhamba kunye nomthandi weencwadi.
Ovelha, wayenako ukufaka umsebenzi wo wosuku njengomNxibelelanisi woNxibelelwano we-Women’s Film Fest, kunye ne-Twitter yokuphatha.
Umphathi wezeMidiya wezeNtlalo uKathy Kendall uyazi ukubaluleka kokusebenzisa i-hashtag kwizinto eziphilayo kunye nendlela yokuyikhupha ngayo. Eu-Twitter biografias e pesquisas sobre kunye e outros tipos de queijo (kuba com queijo e queijo kunye noMenzi wePinata) mostrando como usar o hashtag yokuba e usá-lo para fazer você mesmo: DIY-kunye nomdlali we-DIY.
Agora, você pode criar uma hashtag, iKendall yenza i-bio stand-up, e criar um xa abantu befuna ezo i-hashtag kwi-Twitter.
UMartin Bartels ungomnye umbhali okwazi ukuphuma kunye ne-bio yakhe ekhethekileyo. Kubonakala ukuba, uBabels uyingxube yezo zonke izinto, wazihlaziya ngokwaneleyo ukuba abe yintsimi yakhe (eyindlela epholileyo yokuzichaza).
Nangona ebengumntu onobugcisa obumnandi, uBallels usenobungane kwiindwendwe zakhe ngokubakhuthaza ukuba "bayeke ngokutyelela ngexesha elithile".
Uthotho luyakongeza ubuntu kwi-bio yakho ye-Twitter kunye nomlobi wesithandathu.
Compartilhar tweets zakhe kunye ne-bio zingadakalisa, i-akhawunti yakhe ye-Twitter ayikho in edityanisayo eyenza abalandeli baka-100.000.
Ngokwewebhusayithi yakhe, John Cleese ungumlobi, umdlali, kwaye ngokucacileyo, umntu omude kakhulu. Ngokuqinisekileyo, abaninzi abantu bayazi ukuba ungumculi kwaye no Twitter biografia ibonisa ukuhleka kwakhe kunye nokuba uyaphila, ngokuchasene namahemuhemu.
Waye wakwazi ukubeka umgca ngokuphathelele "uhambo lwakhe lokuhamba" kunye nokuba ungumtshini weMonty Python, ngokuqinisekileyo ufanele ukukhuphela!
Ngaba wayesazi ukuba i-lhamas inokuthi ihlupheke kwi-Berserk sindrome da lhama, imoko apho i-lhama ikholelwa ukuba umnini womntu nayo i-llama, ebangela ukuba babe nobudlova?
Ovelha, uya kufunda ngakumbi malunga nale nyaniso kunye "nezinto ezingabalulekanga ukuba awudinga ukuba wazi" ngaphaya kwe-Uberfacts.
Você gosta de ler e escrever sobre elibi kunye nokubonakalisa iBatman kwi-Lego ephumelelayo: filme do Batman. Kodwa ngokubaluleke kakhulu, uyaziwa ngokuba ngumhlobo wakhe osondeleyo kunye nomdlali osemlinganeni uJason Bateman kwaye ngokubonakalayo njengomxhasi wakhe.
Kuyinto emnandi ukubuyela kumhlobo wabo owaziwayo owaqala xa bobabini basebenze kwingqungquthela ehlaziyiweyo yamahlaya, UkuBanjwa koPhuhliso.
Por exemplo, Jason Bateman wachaza uArnnett kwi-Twitter biografia biokubhala ukuba "ungumhlobo we-Will Arnett".
Umgca olula oqinisa ngakumbi ubuhlobo babo ngelixa ebonisa ukunyuka kwama-comédia. Ngoku, konke esikufunayo nguJoe Biden noBack Barack Obama em efanayo ukubonisa ubungqina babo obusondeleyo!
Por favor, noBateman no-Arnett, escolha um nome para você-Alison Leiby escolha um nome para você-Alyssa Wolff kwi-Twitter.
Kwakhona akazange akhohlwe ukuba após i-imeyile yakhe kunye, ukuba ngaba ufuna ukumbuza ukumbuza ukuba luhlobo luni lokutya okuya kuba baya kudla.
U-Alyssa Wolff disse que não é Alison Leiby lifutshane kwaye liqonde ngqo. Este não é o livro de referência de kwi-bio yakhe njengomngane wakhe wokusela, que é o que você quer dizer kunye naye ngoku ngokucacileyo. Bobabini uWolff noLeiby banenjongo yobuhlobo bethu sonke kwi-Twitter!
Twitter no YTime Siedell yiyo yonke em esinethemba lokuba sikwazi ukuyenza, okukuphela nje ukuyeka yonke em kwaye siphile ubomi bethu njengobungqina obuhle (okanye obuhle). Ngelishwa, ininzi yethu ayikho ibhiliyoni kunye / okanye ihle.
Asiqinisekanga ukuba u-Siedell unokwenjenjalo ukwenza zombini, kodwa siqinisekile ukuba uyazi ukuba unomdla kakhulu.
Umyili woluhlu lwamabango avunyiweyo kakhulu u-LOST uyazi ukuba angabhala njani i-bio ehambelana neqela lakhe njengomnye wabenzi bemkoniso kunye nendlela angayiqondi ngayo, njengathi sonke.
UDamon Lindelof waqaphela ukuba abaninzi abalandeli bakhe bahlala bembuza malunga neendlela zokubonisa kunye neengxelo kunye nokuzihlaziya ngokuthi akayazi le ndaba nokuba, nakuba engumdali.
Iintlungu Zokuqala Zehlabathi
Kwimiphakathi yanamhlanje, "ingxaki yokuqala yehlabathi" iyakhathazeka rhoqo kwaye le akhawunti ye-Twitter iyonwaba kuzo zonke izinto ezincinci abantu abavame ukukhalaza ngazo: ukhetha ukuba yiyiphi ifilimu ukurenta, ukulalisa ukusela okungalunganga, okanye ukubhala i-Twitter bio.
Ukubhala bio-inokuba yintlungu (intlungu yokuqala yehlabathi ukuba uya kuthanda);.
Yiyekele kwiMicrosoft Central, inethiwekhi emalunga nokuhlekisa, ukwenza ibango lesibindi sokuzisa u-Comedy kwi-Twitter. Imfutshane, ilula, kwaye iya ngqo kwinqanaba. Ukugcina uhambelana nophawu lwabo lo gama usahlekisa.
(@Central da comédia)
Efana neComedy Central, uTyler Clark usa o nome de kwaye akesabi ukuzichaza ngokunyanisekileyo. Uyabona ukuba "akaqondi" kodwa nje "ugqoke iziglasi", kodwa ngokubaluleke kakhulu, "uhlale ehle".
Ukuba awukwazi ukucinga iindlela zokubhala i-bio epheleleyo, por amaxesha nje amagama ambalwa malunga nawe ngokwaneleyo.
UJohnny Cupcakes oferece uma marca baseada em weBoston e não uma padaria de cupcakes, naphezu kwegama. Por Afana noJohnny Cupcake, você também pode curtir no Twitter! Siga-nos no Twitter tweets de gosto duvidoso ezibhekiselele kwisambatho nesitayela.
Twitter Twitter biografia biográfica e humorismo humor humor-humor, esabanika ilandelayo enkulu kwaye ikhuthele.
Skittles iyazi ukuba ngubani nantnt ojoliswe kuzo (acima descrito como esiphakathi okanye abantu abanomdla wamacandi amhlophe), kwaye abayiki ukusebenzisa amagama afana "yobumnandi"Biografia do ikuchaza no Twitter.
Nangona i-Skittles yinqaku elikhulu, bakwazi ukubeka ubuntu obuncinane ekubhaliseni kwabo okuhambelana nomfanekiso wabo oqaqambileyo nombala.
U-Elon Musk uninzi lwezinto ezininzi kubantu abaninzi, umvelisi, umbonisi, umgidi we-billioneire, kodwa yena kunye no Twitter bio, yena nje "nguThengisi".
Ngokuqinisekileyo, uninzi kunoko. Kunoko, uMusk okwangoku uswenza kwiprojekthi entsha eyenza i-tunnels eziphakamileyo kwiidolophu ezisemadolobheni kunye nenjongo yeprojekthi ukuthengisa izitya ukuzisa abantu. Yindlela efanelekileyo yokuthengisa iprojekti yakhe ngelixa ehlekisa.
Impressionar kaVictoria iyabazi ukuba bangoobani kwaye yintoni abaphulaphuli babo abalindele kubo. Kungenxa yeso sizathu i-bio yabo ithi yindawo apho "iiNgelosi, iiBombshells kunye nabalandeli abathandanayo ngesondo" banokufumana yonke idosi yabo yemihla ngemihla yesini kwinkampani ye-lingerie.
Enoba ithelevishini, ubomi bokwenene, okanye imidiya yoluntu, u-Ellen DeGeneres uyamhlekisa. Agora você pode encontrar no Twitter as biografias de outros países. Kubonakala ukuba, Kokuba ngumculi kunye nomninimzi we-Ellen Show, naye uyenzeka ukuba ngumqhubi wendlela yeqhwa.
Akunjalo ukuba oko kuyinyani okanye akunjalo, em enye inokuqinisekileyo, tweets zakhe zinyani kwaye ziyamangalisa ngokwenene.
UTom Hanks ngokuqinisekileyo ungumdlali we "homem comum". Esikhundleni sokuzibhalela biografia do Twitter, uHanks unyaniseka ngokuqinisekileyo ukuba ngamanye amaxesha unesimo esihle kwaye ngamanye amaxesha akayena.
Enoba é um exímio autor de okanye, sisamthanda uTom Hanks, que é um advogado que trabalha no Twitter e no Twitter..
UShonda Rhimes mostra o que é o zedrama e explica sobre a anatomia de GreyGrey, que fala sobre a vida e a morteLindelof, uyazi kakuhle ubububi obuza kuboniswa ngethelevishini.
Abantu badla ngokubhala ngeengcamango zabo ngolu hlobo lwecandelo, ’em enokuba no dia de hoje. Wayeka yonke em ngokufaka intlanzi efanelekileyo kwi-bio yayo: "Akunjalo, ulungile?". Okuqinisekileyo kuya kuvala abagxekayo!
Eyaziwayo ngeentengiso zabo ezingenakudandaniswa kunye nomdlali we-Terry Crews, i-Old Spice ye-Twitter biografia.
Bio-ayifanele ibe yinkcazelo ebanzi kakhulu. Agora amaxesha, yonke em oyifunayo yimiyalezo engundoqo yokunika abantu ingcamango yento oyiyo yonke em kunye ne-Old Spice, konke "NGEMISEBENZI, AMAKHAYA, AMAKHASI, AMAKHONO, IZIFUNDO".
Ukuba awukwazi ukuthatha ingqwalasela yabaphulaphuli kumgca wokuqala we-bio yakho, ngoko awukwenzi okulungileyo. Eu-Twitter bio kaMelyssa Griffin mostra tudo sobre wendlela umgca wokuqala kwi-bio yakho ungasetyenziselwa ukuthatha ingqwalasela yabantu.
Por outro lado, na oficina yamahhala, uGriffin wakwazi ukuxelela abantu ngomsebenzi wakhe njengomthengisi wedijithali ngeli xesha kunye nokubandakanya ikhonkco kwiklasi yakhe ye-intanethi. Ngoku ke ukuthengiswa okulungileyo kwalapho!
I-Podcaster kunye guru digital ne-digital uNathan Latka uyaziwa ngenxa yokuziphatha kwakhe okunzima, ngoko akumangalisi ukuba sifunde ukuba ugijima kwiMandla eNyukliya.
ULatka uyazifaka ngokubaluleka kwimicimbi ebalulekileyo yomsebenzi wakhe (i-CEO yeTheTopInbox.com kunye ne-podcast kunye ne-4,5 milhões de downloads) kunye nezixhumanisi zomsebenzi wakhe ukuze abaphulaphuli banokufikeleza.
Iingcali zeendaba zentlalo u-Aaron Lee uyaziqhelanisa nobugcisa bokuqulunqa no Twitter biografia epheleleyo. Como usar o iingongoma eziphambili zokuba ngubani kwi-bio yakhe, umphathi wendawo wengingqi kwi-AgoraPulse, ubunda ubugcisa be-cappuccino, kunye nenyaniso yokuba uyayifaka ngeenwele ezibuhlungu.
Ovelha u-Aaron, siyavuma ukuba unayo inwele eyoyikisayo yokuzisa!
Umlobi weendaba kunye noBufffeed correspondente uWonke uMax Seddon uyazi ukuba ihlazo liyingxenye ebalulekileyo ye-Twitter bio. Ukuhlonipha kukaSeddon ukudibanisa uYakov Smirnoff wenza umsebenzi omkhulu wokongezelela umsebenzi wakhe njengomnyathelisi waseRussia, ngelixa echaza ingozi ezayo nayo.
Obrigado, i-Seddon ayifumananga kwiindaba zeendaba zakhe ze-Twitter ezizenzekelayo kunye nama-tweets.
Uninzi lwabantu luvame ukuba noluntu "oluxhomekeke kwi-intanethi" okanye luyaqhubeka xa kuvela ekwakheni i-akhawunti yeendaba zentlalo, yingakho kuhlaziya ukuba abantu bathande iJason Falls abongeza umnxeba we-akhawunti yakhe ye-media kunye ne-Twitter bio.
Ukuba "uyihlo, umbhali, isithethi", u-Falls ubhala yakhe njengokuba kungabikho nxu lumano lokuba nguyena umntu handhand kwakhe. Yilo hlobo lwesimo sengqondo esiphantsi komhlaba esenza no Twitter biografia ekhethekileyo.
Yiye kwiKot Chow ukuba ubhale i-Twitter engobandakanyi kuphela ukufezekiswa kwayo, umsebenzi wakhe wobugcisa kunye nolwazi lwakhe lokuqhagamshelana naye, naye ulawula ukuthatha i-trolli kwi-intolleth.
Oku kuya ku bonisa ukuba unako ukuthengisa desenvolve yakho kunye nobani kumajelo asekuhlaleni xa uthabatha abazondayo.
Ukufumana Uthotho Kuwe (kunye ne-Twitter Bio)
Kukho umxholo oqhelekileyo kuyo yonke ininzi ye-bio esiyibhale apha ngasentla kwaye yinyaniso yokuba abaninzi bahleka. Ingaba ungumblogi wokuhamba okanye i-guru ye-intanethi yokuthengisa, unomdla wokuzihlaziya ngawe unokongeza ukuba ukuthintela komntu marca kwi yakho kunye nokwenza ukuba ukhululeke kubaphulaphuli bakho.
Ngaba ufuna uncedo lokuphucula ukubhala kwakho? Khangela isikhokelo sethu sokunceda ukuphucula ikhono lakho lokubhala njengeblogi!
I-Twitter mhlawumbi enye amaqonga amaninzi kunamajelo asekuhlaleni, kodwa kwenzeka nokuba yinto enzima kakhulu ukuyisebenzisa.
Gudrs Twitter Bios Okuya Kukwenza Uhambe Oooh noAahh
Wéi funktionéiert Википедия?
10 gadus vecs Trovado de Senpaga Skribta Laboro
Izidingo zokuvikeleka ze Webhu ye-website: Izinto ze-6 Okumele ukwenze ukuze Uvikelekile Iwebhusayithi Yakho
Hoe u uw WordPress.com-site naar een door uzelf gehoste omgeving verplaatst
6 veidi, kā uzturēt kontaktu ar jūsu SEO kontaktpersonām, var palīdzēt jums iegūt ilgstošas ​​partnerības
Sidee loo sameeyaa Qoraallada quruxda badan iyo qaababka fayadhowrka ee goobahaaga？
Optymalny przegląd hostingu
Ху Ммаси Игу Ммаси ди ка оние на-еде и нкири Холливоод
Patikrinkite, ar ne daugiau kaip internetinių svetainių prieglobos (ir ją žiūrėti)
Wawancara eksklusif karo Джеймс Рейнольдс, Пендири Вераво
Manequins: چگونه برای خرید یک نام دامنه نام دامنه برای